I-1-Block ♥ esuka kwi-Main Sq ♥ Internet 40 megas ►►► - I-Airbnb
I-1-Block ♥ esuka kwi-Main Sq ♥ Internet 40 megas ►►►
Ifenitshala ◄◄◄epheleleyo, ilungele ukuphumla, ukuhamba-hamba okanye ukusebenza kude. Isembindini, ikufuphi kwinto yonke kodwa ezolileyo ukuze uphumle. Inendawo yokusebenzela enesitulo esirhubuluzayo kunye nonxibelelwano lwe-Intanethi oluzinzileyo, i-40
megtes Izimvo ezingaphezu kwe-500 zonke ezintle, ii-Superhost izihlandlo eziyi-18 zilandelelana, kunye nomlinganiselo xa uwonke ophantse ube ziinkwenkwezi eziyi-5, ziqinisekisa ukuba akuzukubakho nto ingalindelwanga kwaye uza konwaba xa utyelele eSan Gil.
Bhukisha Imihla yakho! ★★★★★
enkulu - Unxibelelwano lwe-intanethi olugqwesileyo 40mb ezantsi ukuya kutsho ku-20.
- Iindawo ezimbini ezisebenzayo
ezinezitulo ze-ergonomic - Ukubhalisa xa ufika okulula nokukhawulezayo. Iikhowudi zokufikelela.
- Ifenitshala epheleleyo, iflethi okanye indlu ekwicomplex ephucukileyo netofotofo
- Iikhushini nezibane zokufunda kwigumbi lokulala
- Iibhedi ezimbini ezinesofa kwigumbi lokuhlala.
- Iivenkile zokutyela eziphezulu, iivenkile, i-El Puente Mall, isikhululo sebhasi sikamasipala kunye neenkampani zemidlalo ezinobungozi.
Kukho indawo yokupaka yeeyure eziyi-24 ekude neflethi okanye indlu ekwicomplex. Iza kubiza i- $ 10.000 kuphela ngosuku. Ungapaka simahla esitratweni ngaphaya kwesakhiwo.
Ikumgangatho wesibini, isakhiwo sikwindawo ephakathi eSan Gil, kufutshane nayo yonke into. Ikwi-Cra 8 emva kwecawa, ibhloko enye ukusuka kwipaki enkulu. Indawo engalibalekiyo!
Ngaba UNAYO INKONZO YOKUHLAMBA IMPAHLA? YIMALINI?
Ewe, siyayenza loo nto. Iindleko ziyi- $ 7.000 ngekilo kunye noku-ayina i- $ 2.000 ngelaphu ngalinye, ukuba kuyimfuneko.
< IHENGARI> Kukho into YOKUXHOMA IIMPAHLA ngaphandle kwefestile yegumbi lokulala. Nceda ungazixhomeli iimpahla efestileni yegumbi lokuhlala.
4.89 · Izimvo eziyi-168